भोट माग्ने अधिकार एमालेलाई छैन भन्ने प्रचण्डले मधेशलाई यसरी मुर्गा बनाउदैछन,राजपा संगै सती जाँदै प्रचण्ड « हाम्रो ईकोनोमी
भोट माग्ने अधिकार एमालेलाई छैन भन्ने प्रचण्डले मधेशलाई यसरी मुर्गा बनाउदैछन,राजपा संगै सती जाँदै प्रचण्ड
तपाई प्रदेश नम्बर २ मा हुनुहुन्छ । मधेशका जनताले के खोजेका रहेछन् ? भनेर पत्रकार धमलाले गरेको प्रश्नमा उनले थपे,‘सबैभन्दा पहिलो म यहाँका जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । जनतामा नयाँ जागरण पैदा भएको मैले देखेको छु । राजनीतिक र भौतिक जागरण जनतामा पाएँ । जनतामा मर्निङवाक गर्ने कल्चर भएको रहेछ । स्वास्थ्यप्रति सबै सचेत भएको देखेँ । स्वास्थ्यसँगै राजनीतिक चेतना पनि बढेको छ । २ नम्बर प्रदेशका सबै ठाउँमा लगातार घुमिरहेको छु । ठूलो उत्साह जनतामा पैदा भएको छ । नयाँ परिवर्तनका ल्याउने हिसाबले नयाँ नेतृत्वको खोजी मधेशका जनताले गरेका छन् । यस क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीको पर्फरमेन्स राम्रो हुन्छ ।’
चुनावी तालमेल हुन नसक्दा केन्द्रिय गठबन्धनलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? भनेर सोधेको अर्को प्रश्नमा दाहालले भने,‘त्यस्तो केही प्रभाव पार्दैन । हामी चाहन्छौँ कि शान्ती प्रक्रियाका बाँकी काम पनि टुङ्यिोस् । सबै निर्वाचन समयमा नै होस् । देश आथिृक समृद्धितर्फ जाओस भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसकारण अहिलेको चुनावमा तालमेल नहुँदैमा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा कुनै असर पर्दैन ।’ शान्तीप्रक्रिया टुङ्ग्याउन र देशलाई विकासको बाटोमा लैजानका लागि यो सहकार्य धेरै परसम्म लैजानु आवश्यक रहेको प्रचण्डको भनाई थियो ।